ကောင်းမွန်ဝင်း: ကိုကိုက “ ဂြိုလ်သား ” “ကျွန်မက သောကြာဂြိုလ်ကိုရောက်ဘူးသူ ”
ကိုကိုက “ ဂြိုလ်သား ” “ကျွန်မက သောကြာဂြိုလ်ကိုရောက်ဘူးသူ ”
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ.နောက်တက်မည့် ၀န်ကြီးချုပ်ဟာ မိန်.ခွန်းအပြောအဆိုတွေက အလွန်အင်မတန်မှ ငြီးငွေ.ဘွယ်ပျင်းစရာကြီးလို.လူသိများပေမယ်. သူ.ရဲ.ဇနီးဖြစ်သူ မိယုကိစံကတော့ သူနဲ. တခြားစီပါပဲတဲ.။
မိယုကိစံရဲ.ထူခြားတဲ.အပြောအဆိုများကိုကောက်နှုတ်ပြီး “ ၀ိဥာဉ်တခု အာကာသာယဉ်ပျံစီးပြီး သောကြာဂြိုလ်ကိုရောက်ရှိခြင်း”ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ. မိယူကိစံအကြောင်းကို အေပီသတင်းဌာနက စက်တင်ဘာလ(၃)ရက်နေ.ထုတ်သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ ဂျပန်ရိုက်တာသတင်းဌာနကတော့ “နောက်တက်မယ့် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ. နံမည်ပြောင်က “ဂြိုလ်သား” လို.ဆိုပေမယ့် သူ.ရဲ.ဇနီးကမှ သူ.ထက်ပိုပြီး အခြားကမ္ဘာကအကြောင်းတွေကို ပြောနိုင်သေးတယ်လို. ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းရဲ. ဇနီးအကြောင်းကို မိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော့ အေပီသတင်းဌာနနဲ. တွေ.ဆုံတဲ. အင်တာဗျူးမှာ မိယုကိစံက“ရုပ်ရှင်မင်းသားတွမ်ခရုဇ် (Tom Cruise) ကိုသူကအရင်ဘ၀တုန်းက အသိမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ.ကြောင်း၊ တွမ်ခရုဇ်က အရင်ဘ၀က သူနဲ.အတူ ဂျပန်လူမျိုး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း” တွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်။
အီတလီနိုင်င်ငံ သတင်းဌာနတစ်ခုကတော့ မိယုကီစံရဲ.သောကြာဂြိုလ်ရောက်ဘူးတယ်လို. ပြောတာဆိုတာတို.ဘာတို.ကိုရည်ညွန်းပြီး “ဂျပန်လူမျိုးတွေထဲမှာတော့ လူထူးလူဆန်း” လို. ဆိုရမယ်ဆိုပြီး ဖေါ်ပြကြပါတယ် ။ အဲဒီလို မိယုကိစံရဲ. အဆန်းအပြားလူတွေကို အံ့သြစေမယ့် အပြောအဆိုတွေကို သတင်းထုတ်ပြန်တဲ. အမေရိ သတင်းဌာနတခုက သတင်းကြေငြာသူဟာဆိုရင် သတင်းကြေငြာနေရင်းနဲ. မအောင့်နိုင်ပဲ ရီချရလောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တဲ.။
အဲဒီလိုနဲ.ပြီးခဲ.တဲ.ဂျပန်နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာ အပြတ်အသတ်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီခေါင်းဆောင်
ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအို(၆၂)နှစ်ရဲ. ဇနီးသည် မိယုကိစံ (၆၆)နှစ် က လူအများကို အာရုံစိုက်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ.ရဲ. ဘ၀နဲ. သူ.ရဲ.ပြုမူပြောဆိုချက်တွေကြောင့်ပါပဲ။
မိယုကိစံကို ၁၉၄၃ခုနှစ်ဇွန်လ၂၄ရက်နေ.မှာ ရှန်ဟိုင်းမြို.မှာမွေးဖွါးခဲ့ပါတယ်။ မိဘတွေနဲ. အတူ ဂျပန်နိုင်ငံကို ပြန်လာပြီး၊ ကိုဘေးမြို.မှာကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်စကူးနဲ. ကိုဘေးမြို.က မျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်းတို.ကိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး၊ တာကာ့ရာဇုက (ဂျပန်အမျိုးသမီးများသာပါဝင် ကပြသော ပြဇတ်)ပညာကျောင်းကို ဆက်လက်အောင်မြင်ပြီးတဲ.နောက် စင်မြင့်ဖျော်ဖြေပွဲများနဲ. ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းများကို ၆နှစ်ကြာ လုပ်ခဲ.ပြီး၊ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ပထမအိမ်ထောင်နဲ.ကွဲပြီးနောက် အမေရိကကို ရောက်သွားခဲ.ပါတယ်။အမေရိကကိုရောက်တဲ. အချိန်မှာတော့၊ ဆန်ဖရန်စစ်စကို စတမ်ဖို.ဒ်တက္ကသိုလ်မှာစာသင်နေတဲ. ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအိုနဲ. ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ. မိယုကိစံတို. တွေ.ဆုံခဲ.ကြပါတယ်။ ၁၉၇၅ခုနှစ်မှာ သူတို.နှစ်ဦးလက်ထပ်လိုက်ကြပါတယ်။ သူတို.နှစ်ဦးမှာ သားတစ်ယောက်ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
တာကာ့ရာဇုက (ဂျပန်အမျိုးသမီးများသာပါဝင်သော ပြဇတ်)ကမင်းသမီးတစ်ယောက်ကနေ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. ဖတ်စ်လေဒီဖြစ်လာတာကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. သမိုင်းမှာ မိယုကိစံက ပထမဦးဆုံးဆိုရင်မမှားပါဘူး။ မိယုကိစံနဲ. တာကာ့ရာဇုကပြဇတ်မှာ စင်ပေါ်အတူတက်ကပြခဲ.ဘူးတဲ. ဟာ့ဆုခါ့ဇဲ ဂျွန် စံက
“မိယုကိစံကအမြဲတမ်း လူငယ်တစ်ယောက်လို သွက်လက်ဖျတ်လတ်နေပြီး အရင်ကတော့ မိတ်ကပ်လည်းသိပ်မလိမ်းပါဘူး၊ အခုတော့ တကယ့် လေဒီစတိုင်နဲ. ဖက်ရှင်လည်းကျနေပြီလေ”လို. ဆိုပါတယ်။ “မိယုကိစံရဲ. အိမ်မှာထမင်းသွားစားဘူးပါတယ်။ပါစတာ(အီတလီခေါက်ဆွဲ)လုပ်ကျွေးပါတယ်။ လက်ရာကလည်း တော်တော်ကောင်း တယ်”။
မိယုကိစံက ဂျပန်စားသောက်ဆိုင်မှာလုပ်ဘူးတဲ့အတွေ.အကြုံရှိပြီး “ဟာ့တိုယာမာ့ စားသောက်ဆိုင်မှ ကြိုဆိုပါတယ်” ဆိုတဲ. စာအုပ်အပါအ၀င် ဟင်းချက်နည်း စာအုပ်တော်တော်များများကို လည်း ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီလို ယောက်မကိုင်ထမင်းဟင်းချက်ပြီး ကလောင်ကိုင်စာရေးတဲ. မိယုကိစံဟာ ပြီးခဲ.တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ပါတီရဲ. အလုပ်ကိစ္စနဲ.နယ်လှည့်တရားပွဲများကို ၀န်ကြီးချုပ်လောင်း ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအိုမသွားနိုင်ခဲ့တဲ. ဟို.ကိုင်းဒိုးလိုဒေသတွေကို မိုက်ကရိုဖုန်းကိုင်ပြီး စည်းရုံးရေးဆင်းတရားဟောခဲ့ ပါတယ်။ အလုပ်တွေများတဲ. ကြားထဲကပဲ တာကာ့ရာဇုက အဖွဲ.၀င်ဟောင်းတွေရဲ.တွေ.ဆုံပွဲကိုလည်း မပျက်မကွက် တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေများလှတဲ. မိယုကိစံကို မိတ်ဆွေ ဖြစ်သူ ဟာ့ဆုခါ့ဇဲ ဂျွန် စံက “ မျက်နှာထားကလည်းအမြဲချိုပြီး၊ ဘာသာစကားကလည်း ကျွမ်းကျင်၊ အပြောအဆိုကလည်းယဉ်ကျေးတော့ရှေ.လျှောက်အလုပ်တွေအရမ်းများလာတဲ.အခါ၊ ကျမ္မာရေးတော့ ဂရုစိုက်စေချင်တယ်”တဲ့။
မိယုကိစံက အမျိုးသမီးများတွေ.ဆုံဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာ“ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်စိတ်ကူးတဲ.အတိုင်း ပုံပေါ်ပါတယ်“ဆိုတဲ. ခေါင်းစဉ်နဲ. မိန်.ခွန်းတစ်ခုပြောကြားခဲ.ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်ပြောဆိုတဲ. စကားတစ်ခွန်း ဖြစ်တဲ. “ဖြစ်မယ်လို. ယုံကြည်ရင်တကယ်ဖြစ်မယ်။ ယုံကြည်မှု က အရေးကြီးဆုံးပဲ” ဆိုတာကို ထောက်ခံတဲ. အကောင်းမြင်ဝါဒ ကို ဖေါ်ပြသွားတာပါပဲ။
တိုကျိူတက္ကသိုလ်ရဲ. ပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်၊ သားတစ်ယောက်ကို ပြုစုပျိုးထောင်
ခဲ.တဲ. မိယုကိစံ က သူ.ရဲ. ခလေးပြုစုပျိုးထောင်ပုံ တစိတ်တဒေသကို “သားနှစ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်လောက်အထိ ကျွန်မထင်တာကမှ အားလုံးအမှန်လို. ယူဆခဲ.တဲ. မုန်းစရာမိန်းမတယောက်ပေါ.။ ခပ်ဖြည်းဖြည်းနဲ. အေးအေးနေတတ်တဲ. သားကို ဒါလေးတောင်မရဘူးလားတို.၊ ယောက်ျားပဲ ပြတ်ပြတ်သားသား ဖျတ်ဖျတ်လတ်လတ်နေစမ်း” လို. စိတ်ဆိုးလိုက်မာန်လိုက်မဲလိုက်နဲ.ပေါ. ဆိုပြီးသူ.ရဲ. မိခင်ဘ၀ကို သတိတရ ပြန်ပြောပြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်ရင်းနဲ.မှ တဖြည်းဖြည်းသိလာရတာက “သားလေးက၊ သိမ်မွေ.အေးဆေးတဲ့ သဘာဝရှိတာပဲလေဆိုတာပါ”။ နောက်၊ သားကြီးလာတော့ “အမေအဲလိုပြောင်းလည်းသွားခဲ.လို. ကျွန်တော် အခုလိုလူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်လာရတယ်လို.” ပြောတယ်လေဆိုပြီး သူမရဲ.မိခင်ဘ၀အတွေ.အကြုံတွေ ကို ဖေါက်သည်ချပါတယ်။
လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ.ပတ်သက်ပြီးတော့ မိယုကိစံရဲ. အယူအဆက “လူအများကို အမြဲတမ်း ကျေးဇူးတင် တဲ.စိတ်ရှိဘို.က အဓိကအရေးကြီးဆုံးပဲ။ လူတွေဆီကဘာရမလဲလို. မျှော်လင့်တာထက်၊ ကိုယ်ကစပြီး လူတွေကို ဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲ ဆိုပြီး လူအများရဲ.ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်။ လူအများအကျိုးကို ဖြည့်ဆည်းရင်းနဲ. ကိုယ့်ရဲ. အလိုဆန္ဒတွေပြည့်ဝ လာတာပဲ။ မိယုကိစံက ဆက်ပြီး “ ငါ၊ လုပ်နိုင်မယ်လို. စိတ်က တွေးရင်၊ တကယ်လုပ်နိုင်ပါလိမ်.မယ်။ စိတ်ပြတ်သားပြီး ယုံကြည်မှုရှိလို.ကတော့ လူ.ဘ၀ဆိုတာ ကိုယ်မှန်းရင်မှန်းတဲ.အတိုင်း ဖြစ်တာပေါ. ၊ အဲဒါက ဘ၀ရဲ. သော့ချက်ပဲ”။
ပထမအိမ်ထောင်နဲ.ကွဲဘူးခဲ.ရတာကိုလည်းမိယုကိစံက“လူ.ဘ၀မှာဖြစ်ပျက်တာတွေဟာဘယ်ဟာမှ၊ အလားဖြစ်သွားတဲ. အရာမရှိပါဘူး။ အားလုံး အကျိုးအကြောင်းဆက်စပ်မှု တွေရှိပါတယ်။ မကောင်းဘူးလို.တွေးရင် မကောင်းတာနဲ. အဆုံးသတ်ရလိမ့်မယ်။”
ခင်ပွန်းသည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်းဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအို နဲ. အခြေအနေကိုတော့
ကျွန်မကို သူကပြောတယ်၊ “မင်းက ငါ့ရဲ. နေမင်းကြီးပဲတဲ.”။ ကျွန်မကိုလက်ထပ်တဲ. အချိန်တုန်းက “ယောက်ျားတွေက ကိုယ်လက်ထပ်မယ့်သူကို အပျိုတွေထဲက ရွေးတယ်။ ငါကတော့ မင်းကို အမျိုးသမီးထုအားလုံးထဲကရွေးတယ်” လို.ပြောပါတယ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်ရဲ.အခုအချိန်အထိ မပြောင်းလည်းတဲ. အချစ်ရှိန်ကိုလည်း ဖေါ်ထုတ်ပြောကြားသွား ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ.ဂျပန်အကြားဘယ်လို သဘောထားရှိပါသလဲဆိုတော့ “အမေရိကားက သတင်းစာတွေမှာ ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ကိုအိဇုမိဂျွန်အိချိ ကို ပါပီလေးလို.ရေးကြတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. မွန်မြတ်ထူးခြားတာတွေကို ပိုပြီး ကမ္ဘာကသိအောင် ကြိုစားနိုင်မယ်ဆိုရင် အဲဒီလို အပြောအဆိုတွေကို ပြောင်းလည်းနိုင်မှာပါ”
“ မီရှယ် အိုဘားမား (Michelle LaVaughn Obama) နဲ. ကားလ် ဘရူနီ( Carla Bruni-Sarkozy) တို.ရေ သတိသာထားနေပေတော့ မင်းတို. နှစ်ယောက်လုံးကိုကျော်တက်မယ့် ဖတ်စ်လေဒီအသစ်ကတော့ ပေါ်ထွက်လာပြီဟေ.” ဆိုကာ (၃)ရက်နေ.ထုတ် အင်္ဂလိပ်သတင်းစာ အင်ဒီပန်းဒန်.မှာတော့ “ ဂြိုလ်သားကမ္ဘာတောင်ရောက်ဘူးထားတယ်တဲ. နော်” လို.အစချီပြီး ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရရှိတဲ.သတင်းတွေနဲ.အတူ မိယုကိစံရဲ.အကြောင်းတွေကို တွဲပြီးဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အခုလို သတင်းစာက ပိုပိုမိုမိုရေးသားရတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။
မနှစ်က မိယုကိစံကိုယ်တိုင်ရေးသားထုတ်ဝေတဲ.“ ကျွန်မ ကြုံရ၊ ဘုံဘ၀က ထူးဆန်းထွေရာများ” စာအုပ်မှာ “ဟိုအရင်တုန်းက ကျွန်မ အိပ်ပျော်နေတုန်း ဂြိုလ်သားကမ္ဘာကို ရောက်သွားဘူးပါတယ်”တဲ. ။
သူရောက်သွားခဲ.တဲ. ဂြိုလ်သားကမ္ဘာရဲ. အကြောင်းကို ဆက်လက်ပြီး “ကျွန်မရဲ. ခန္ဒာကိုယ်က အိပ်ပျော်နေတဲ. အချိန်မှာ ကျွန်မရဲ. ၀ိဥာဉ်ဟာ တြိဂံပုံ ပုဂံပြားပျံစီးပြီး သောကြာဂြိုလ်ကိုရောက်သွားလေရဲ.၊ သောကြာဂြိုလ်ဆိုတာ အစိမ်းရောင်ရှိပြီး သိပ်လှတဲ.နေရာတစ်ခုပေါ.”လို. သောကြာဂြိုလ်ကို မိတ်ဆက်ရှင်းပြထားလေရဲ. ။ မိယုကိစံက သူ.ရဲ.စာအုပ်ထဲမှာ “အဲဒီအိပ်မက်ကိုမက်တုန်းက ကျမအရင်ခင်ပွန်းက အိပ်မက်ပဲ လို.ပဲပြောပါတယ်။ အခုခင်ပွန်းသာဆိုလို.ကတော့ အို၊ တကယ်ဆန်းကြယ်တာပဲ လို.ပြောမှာပါ” လို.ရေးထားပါသေးတယ်။
တကယ့်လက်တွေ. မှာ ကတော့ အခုလက်ရှိ ခင်ပွန်း ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်း ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအို ရဲ. နံမည်ပြောင်က “ဂြိုလ်သား” ။
ဇနီးသည်ဆီက အငွေ.အသက်ကြောင့်လားတော့မသိပါဘူး ခင်ပွန်းသည် ကို မိယုကိစံက သောကြာဂြိုလ် ကို အိပ်ပျော်နေတဲ.အချိန်ရောက်သွားဘူးတယ်လို. ပြောနေပါတယ်လို. ဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအိုက“ ဟာ၊ ဟုတ်လားတယ်ကောင်းပါလား”ဆိုပြီး ရယ်ရယ်မောမော ဖြေကြားသွားပါတယ်။
ကျိုဒိုသတင်းဌာနနဲ.အင်တာဗျူးမှာတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ဂျပန်ကိုလာဘို.အစီအစဉ်ရှိတဲ့ မီရှယ် အိုဘားမားနဲ.အတွက် ဘာများပြောစရာရှိပါသလဲဆိုတော့“ သူ.ကိုကြည့်ရတာသဘာဝဆန်ဆန်ရှိလှတယ်။ ကျွန်မနဲ.လည်း စိတ်နေသဘောထား ခံစားချက်တွေ တူမလားလို.၊ တွေ.ဘို.အခွင့်အရေးရှိရင် တွေ.ချင်ပါတယ်”။
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ. နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ. ဇနီးသည်ဆိုတာ ရှေးရိုးအမွေအနှစ်ကိုထိန်းသိမ်းပြီး ရိုးရာဆန်ဆန် သေသေ၀ပ်ဝပ်နဲ. နေကြတယ်တဲ. သူတို.တွေကြားမှာ မိယုကိစံ ကတော့ နံမည်ကြီးပြီးရင်းကြီးတော့တာပါပဲ။ တီဗွီက အစီအစဉ်တွေမှာခဏခဏပါပြီး စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းလောက ကနေ နိုင်ငံရေးလောကအထိသူ.ရဲ. အကြောင်းတွေက ပြောစရာတွေက များလှပါတယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ. မဲဆွယ်တရားပွဲတွေမှာလည်း မိယုကိစံရဲ. တက်ကြွပြီး ရင်းနှီးမှုရှိတဲ. အပြုံးမျက်နှာက တကယ်ကို အရေးပါအရာရောက်တဲ. အခန်းကနေပါဝင်ခဲ.ပါတယ်။
အပတ်စဉ်ထုတ် “ဆန်းဒေး နေ.စဉ်”မှာ မိယုကိစံရဲ. က အရွေးခံအမတ်လောင်းများကို အားပေးတဲ. ပွဲတစ်ခုမှာ သူ.ကို လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ. ဓါတ်ပုံရိုက်လာသူတွေရဲ.ရှေ.မှာ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ. မွန်းဝေါ့ခ် အကကို ပြန်ကပြတယ်လို. ဆိုပါတယ်။
အဲဒီလိုတွေလုပ်တတ်တဲ. မိယုကိစံကို ခင်ပွန်းသည် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်လောင်း ဟာ့တို ယာမာ့ ယူကီအိုကတော့“ အမြဲတမ်းထွန်းလင်းတောက်ပနေတဲ. ကျွန်တော့ရဲ. နေမင်းကြီး” လို. တင်စားပါတယ်။
ဟင်းချက်နည်းစာအုပ်မျိုးစုံကို ရေးသားထုတ်ဝေသလို၊ ခင်ပွန်းသည်ရဲ. ဖက်ရှင်ကြီးကြပ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်နောက်ကနေ ရှုတ်ပွနေတဲ. ဆံပင်တွေကို ရှင်းပေးသလို အ၀တ်အစားကိုလည်း မိယုကိစံ ကပဲစီမံပါတယ်။ ခင်ပွန်းသည်ကို လက်ချိပ်ပြီး စင်မြင့်လမ်းလျှောက်ပွဲကိုလည်းထွက်ခဲ့ဘူးပါတယ်တဲ.၊မိယုကိစံက ဘာမဆို သိချင်တတ်ချင် စိတ်ရှိပြီး သူမအတွက် အသစ်အဆန်းတွေမှန်သမျှ(ချဉ်ပတ်တည်တာအစ၊ ကြွေထည်ပစ္စည်း၊ အချုပ်အလုပ်အဆုံး) စမ်းသပ်လုပ်ကြည့်တာလည်းဝါသနာပါပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မိယုကိစံစိတ်ဝင်စားနေတာကတော့ ဟောလိဝုဒ်မှာ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ဘို.ပါ။ အဓိကသရုပ်ဆောင်ကတော့ အများသိကြတဲ.အတိုင်း တွမ်ခရုဇ်ပေါ.။ “ကျွန်မသူ.ကို ကောင်းကောင်းသိနေတယ်။ သူကလည်းကျွန်မကိုတွေ.ရင် “မတွေ.တာကြာပြီ”လို.ပြောပြီး နှုတ်ဆက်လာလိမ်.မယ် ထင်တယ်”။
မိယုကိစံရဲ.စိတ်နယ်လွန်ဆန်တဲ. အကြောင်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ တိုကျိုတီဗွီရဲ. အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ “ကျွန်မနေမင်းကြီးကိုစားသုံးပါတယ်” လို.ပြောတော့ နားထောင်နေတဲ. အစီအစဉ်မှုးက ဘာပြန်ပြောရမှန်း မသိကြောင်နေခဲ.ပါတယ်တဲ. ။ အဲဒါကိုတောင် မိယုကိစံက လုံးဝအရေးမစိုက်ပဲ “ဘယ်လိုလုပ်ပြီးစားသလဲလို စဉ်းစားနေတာမဟုတ်လား၊ ဥပမာ၊ နေမင်းကြီးထွက်လာတယ်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ဖဲ.ဖဲ.ပြီး ပလုပ်ပလောင်းစားပစ်လိုက်တာပေါ့။” ဆိုပြီး အပေါ်ကိုမော့ လက်နှစ်ဘက်က လေကိုဖဲ.ဖဲ.ပြီး သရုပ်ဆောင်တော့တာပါပဲ။ ကုန်ကုန်ပြောရင် “အခုတလော ကျွန်မခင်ပွန်းကတောင် ပလုပ်ပလောင်းနဲ. လိုက်စားနေပြီ”လို. ဆက်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ အဲဒီမဂ္ဂဇင်းရဲ. အချပ်ပိုအထူးတွေ.ဆုံခန်းမှာလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ၀န်ကြီးချုပ်လောင်း က “ဂျပန်မှာက မျက်စိနဲ.မမြင်နိုင်တဲ. စိတ်နယ်လွန်ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို လေ.လာလိုက်စားမှု က အများကြီး နောက်ကျနေသေးတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေတဲ. အတွက် ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကို အဲဒီနယ်ပယ်နဲ.ပတ်သက်ပြီး လိုက်စားစေချင်တယ်”လို.ဆိုသွားပါတယ်။
နိုင်ငံရေအာဏာကို ရရှိသွားပြီဖြစ်တဲ. ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ဂျပန်နိုင်ငံကို ဘယ်လို ပြောင်းလည်းပေးမလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားမှုနဲ.အတူ အရောင်အသွေးတစ်မျိုးနဲ. ဆန်းကြယ်လှတဲ့ ဖတ်စ်လေဒီရဲ. မယားဝတ်ငါးပါး ဘယ်လိုကျေပွန်မလဲ ဆိုတာကိုလည်း လူတွေက စောင့်ကြည့်နေကြလေရဲ.။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Saturday, September 05, 2009
မကောင်းမွန်ဝင်းရေ... အခုလို ထူးခြားတဲ့ ထက်မြက်တဲ့ အမျိုးသမီး အကြောင်းဖတ်ရတာ သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာပါပဲ။ အောင်မြင်မယ့် ယောက်ျားတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေထဲမှာ ထူးခြားတဲ့ သူတို့ကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်လောက်အော် အရည်အချင်းရှိတဲ့ မိန်းမကို ရွေးချယ်တတ်တာလည်း တခု အပါအဝင်များလားလို့ ဆက်တွေးမိပါတယ်။ စာကိုဖတ်ကြည့်ရုံနဲ့ ပို့စ်အတွက် သေချာအချိန်တွေပေးပြီး အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းဝေမျှထားမှန်း သိရလို့ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်...